Socdaalkaygii Muqdisho (Qormo Xiiso Leh Xaqiiqdana Ku Salaysan) | Bartamaha
WQ: Sayyidcali Xuseen Gaabane
Xaruntii Ummadda, Magaala-madaxdii Dalka, Caasummaddii iyo xuduntii Soomaali-weyn, Waana xaruntii isku xidhi jirtay ilaa haddana isku xidha bah-weynta iyo bulshada soomaaliyeed.
Inta uusan Qaran-JabkuÂ dhicin Soomaalidu waxay ku soo hiran jireen dhan walba iyo baahi kasta oo ay qabaan Muqdisho, Haday noqon lahayd adeegyadda bulshadda sida: waxbarashadda, caafimaadka, shaqadda iyo wax yaabo kaloo fara badan.
Arintaas kolka dhan laga eego waa wax wanaagsan, docda kale na haddii la iska taago ma qumana in baahidda Dadka oo dhan ay ku xidhnaato Magaalo qudha, oo waxaa aad u qurxoonaan lahayd in lagu balaadhiyo guud ahaan Goboladda Dalka.
Sidaa soo kale maanta oo uu Dalkii burbursan yahay na weli Magaaladda Muqdisho waa halbowlaha iyo dunta isku xidha Ummadda Soomaaliyeed. Bal u fiirso tusaale ahaan Qiimaha Sarifka lacagaha qalaad waxaa lagu jaan-gooyaa kolba heerka iyo qiimaha uu ka joogo Magaaladda Muqdisho. Magaalooyinka Garoowe,Hargeysa,Gal-kacyo,Cadaado,Balad-weyn,Jowhar,Kismaayo iyo Dhoobley oo ku taal xudduudda Kenya-Soomaaliya dhammaantood waxay ku sar-goâ€™an yihiin ascaartooda oo Mood iyo Nool ba leh Magaaladda Muqdisho, gaar ahaan Suuqa weyn ee Bakaaraha.
Arimahaas oo dhan waxay ku tusinaysaa in Magaaladda Muqdisho weli ka goâ€™in quluubta Dadka Soomaaliyeed Qurba-joogoodda Iyo Qaran-joogooda ba.
Waxaase kasii qosol badan in qof kastaa oo Soomaali ah oo Qaxootinimmo isu dhiibaya ama iska diiwaan-galinaya Xafiis, uu sheegto inuu ku dhashay Magaaladda Muqdisho.
Magaaladda Muqdisho waa Magaalo Taariikh fac-weyn ahÂ leh, wax badanna ay ka qoreen Qalinley Soomaali iyo Ajnabi ba isugu jira, Waa Magaallo ay isaga kala dambeeyeen Boqortooyooyinkii Adduunka mar ka talin jiray iyo xadaaradihii kala gadisnaa ee nolosha biniâ€™aadamka soo maray qaarna uu weli raadkoodu qoyan yahay. Inkastoo marmarka qaar aad is oran karto Soomaalidu Xaddaaradba maleh, waligood na Dowladnimmo sooma arag kolka aad eegto habdhaqankooda bahalnimadda ah iyo sida aysan nolol ilbaxnimo iyo isqadarrin ku dhisan ugu wada noolaan Karin, isuguna quurin walaaltinimo iyo wax wada qabsi, tiiyoo ay wax walbaa wadaagaan, Diin, Af,Dhaqan iyo Midab ba. Waana arinta layaabka ku noqotay bulshada adduunka lagana dhaadhicin Karin inay is dilaan isna gumaadayaan dad wadaaga wax walboo busho ay wadaagto.
Waxaa kaloo kasii yaab badan in Soomaalida labadii is wareysata ba ay yihiin walaalo, ilma adeerro, ilma abti, seediyaal, ama dad xidid ah ugu yaraan bal adigba arintaas baaritaan ku samee?. SOOMAALIDU WAA MID QUDHA, SINJIGA SOORACA IYO AFKABA, DIIN KALA SOOC SOOCANTIYO, MALAHA WAXAY KALA SITAAN.
Waxay ahayd maalin Isniin ah Taariikhduna ku beegnayd 8-dii Ferraayo Sanadka 2010. Waxaan Diyaarad Ganacsi oo rakaab ah kasoo raacay Gagidda Caalamiga ah ee JOMO KENYATTA INTERNATIONAL AIRPORT eek u yaal xarunta Dalka KENYA EE Nairobi abaarre 7:30 Subaxnimo.
Muqdisho iyo Nairobi sidaa uma kala foga oo Diyaaraddu waxay hawadda ku jirtay qadar saacad iyo 20 daqiiqo ah. Waxa ugu horeeya ee qofka Muqdisho kasoo daga uu dareemayo waaÂ Hafi wax xoogaa kulayl ah wadata, siiba waxaa aad u dareema arintan dadka qurba-joogta ah ee dalalka qabowga badan ku noolaa amaba ku nool hadda, hadana maaha hawaddu mid wax kuu dhibeysa oo waa cimilo dhexdhexaad ah oo aysan jirin wax lagu doorsado macaanka ay qabto ( qofkii yaqaan ayaa yaqaan).
Garoonka Caalamigaa Ee Aadan Cadde International Airport (Ex Muqdisho International Airport)Â Waa garoon aad u weyn kolka la barbardhigo Garoomadda qaar ee adduunka ku yaal gaar ahaan Caasimado dhowr ah ee ku yaalÂ Qaarad weynta Afrika. Burburkii iyo baabiâ€™ii Dalka wada cammimay, saameyn aan sidaa u buudhnayn ayaa Garoonka ka soo gaadhay, kadib markii kooxo wax magarata ah ay ka qufteen oo ay kala baxeen jaygii iyo laamiggii ku dhisnaa waddadii ay Diyaaraduhu ku ordi jireen (Runwey-ga).
Alle mahaddii inta badan Garoonku wuu badbaaday, Inkastoo uu muddo dheer u qabirnaa Hogaamiye kooxeedyadii Dalka mar ku amar ku taaglayn jiray.Waxaana ALLE fadligiis dib mar kale ufurmay ilo kamid ah kaabayaashii dhaqaalaha Dalka waa Garoonka diyaaradaha iyo Dekadda weyn Ee Muqdisho.
Madaarku wuxuu Xarun Kmg ah uyahay Ciidamadda ka socda Midowga Afrika ee AMISOM loo yaqaan. Kuwaasoo ilaaliya Guud ahaan Xarumaha Dowladda sida: Madaxtooyada,Madaarka iyo Dekadda weyn Ee Muqdisho, waxaana intaas u dheer oo ay ilaaliyaan Madaxda Dowladda KMG.
Habsami usocodka Madaarku waa mid xowli ku socda, inkastoo marka ay Madaxdu dhoofayso ay hakad galaan howluhu sababo ammaan iyo duqeymo lala beegsado.Madaarku waa mid aad u mashquulsan oo waxaa isticmaala Diyaaraddo ganacsi oo gaar loo leeyahay, islamarkaana ukala goosha guud ahaan Gobolka Geeska Afrika sida: Nairobi, Djabouti,Kampala,Hargeysa,Barbara,Galkacyo,Muqisho iyo kuwo kaleba.
Sidaasoo kale waxaa ka dhoofa Madaarka Muqdisho Diyaarado duulimaad toos ah ku taga Gobolka Bariga dhexe.Dhanka kale wax kastoo shaqeeyaa dhaliil ayay leeyihiin. Kolley aniga ahaan intii yareyd ee aan ku sugnaa Garoonka dhexdiisa waxaa ii muuqday ceebo iyo agaasima-xumoÂ ay ku ka cayeen qaar ka mid ah shaqaalaha Madaarka.Tusaale ahaan kolka aan kasoo daggay Garoonka waxaa igu soo yaacay dad aan wadan wax dareys ah ama ugu yaraan aysan ka muuqan astaamaha lagu yaqaan shaqaalaha Madaaradda Caalamiga ah, midba dhan ayuu ii jiitay, mid wuxuu igu canaantay inaan markale dhiibo lacagtii tigidka diyaaradda tiiyoo aan horay u dhiibay, waxaa layaab igu noqotay in uu igu yidhi diyaaradda deyn ayaad kusoo raacday!- waa yaab !- oo sidee diyaarad deyn loogu soo raacaa?. Kadar oo dibi dhal mid kale ayaa leh â€œadigu ajnabi ayaad tahay, dalka gali maysid jeer aad $50 dhiibtoâ€. Mid kale ayaa si hal haleen ah ii jiitayÂ oo igu yidhi â€œ TAXI ayaa bannaanka Garoonka iigu baakiman ee soo dhaqaaq” Waxaa kasii daran in mid kale igu sharciyeeyay inaan dhammaan sarifto lacagaha qalaad ee aan sito inta aanan garoonka ka bixin, malahayga ninkan dambe wuxuu ahaa SARIFLE doonayay inuu qiima jaban iiga badasho wax xoogaaga aan sitay oo qalin-shubato ayuu iila muuqday.
Intaas oo mushkiladood waxay igu dhacayaan mar qudha iyo meel qudha, bal adigu sawirro fowdada intaa la eg. Koley anigu waxan ku tilmaamay sidii maqaxi koox gaar ah u futantahay iyo boosteejooyinka ama astaamaha gawaaridda laga raro oo aalaaba waa meelo saxmad miidhan ah buuquna uu ku badan yahay â€¦.aragtideydaâ€¦., maxaayeelay nidaamkii Dowladnimmo meesha kama muuqan.
Magaaladdu waxay u kala goâ€™antahay laba qeybood, waa qeybta ay Dowladdu joogto iyo qeybta kale oo ay Mucaaradku ka taliyaan. Xadka kala qeybiya wuxuu kasoo bilowdaa dhanka Xeebta Liido, isagoo soo dhexmara Degmooyinka C/Caziis, Shibis, Boondheere, Wardhiigley, Hodan iyo Howlwadaag. FG. Wax badan ayaa is badali karaÂ bacdamaa uu jiro isriixriix. Waxaan ukala qaadayaa laba Gaddi, GadiggaÂ Dowladda iyo Gadigga Mucaaradka.
Marka si loo fiiriyo way ka saxmad iyo buuq badan tahay dhanka ay Mucaaradku ka arrimiyaan, sababtuna waxay tahay way ka madfac iyo hoobiye yar tahay, inkastoo mar marka qaar uu ku hoobto. Dadka MagaaladdaÂ dagaaladda fool ka foolka ah waxay ka neceb yihiin madaafiicda la is weydaarsado oo magaaladda afarteeda koono lagu garaaco, maxaayeelay waxaad ka garan kartaaÂ magacyada ay ula baxeen iyo sida ayÂ uga qeyla-dhaammiyaan kolka lagu xasuuqo. Magacyadda waxaa ka mid ah: Fooryaaye, Rujiye, Kii Weynaa iyo kuwo kale ba.
Dhanka Dowladda kaso kow madaafiicda oo aad ugu yar marka la barbar-dhigo dhanka Mucaaradka, hadana Dadku waxay aad uga cawdaan dhaca joogtada ah oo ay kula kacaan ciidamadda Dowladda ama ugu yaraan Rag soo labbista dareyska ciidamadda lagu yaqaan balse qowleysato ah oo aan ciidamada shaqo ku lahayn. Dhanka ay dowladda ka taliso Gabdhaha indhashareerka xirta aalaaba way iska faydaan sifo aan loogu tuhmin inay shirqool maleegayaan. Waxaa ku badan dhanka ay Dowladda maamusho qaraxyada iyo dilalka qorsheysan oo ay fuliyaan ama lagu eedeeyo dhinacyadda Dowladda kasoo hor jeeda.
Sidaasoo kale Askarta Dowladda ayaa marmarka qaar dhexdooda is dirira oo waxyeelo isgaadhsiiyaÂ ama dad shacab ah ay wax kasoo gaadho rasaasta ay tuurayaan.
Ciidamadda Dowladda ma aha kuwo ay ka muuqato haybaddii iyo sharaftii lagu yiqiinay Ciidamaddii qalabka siday ee Soomaaliya oo Booliis, Militari iyo Nabad-sugid ba lahaa. Waa Ciidan ayÂ weli ka muuqato saameyna uu ku yeeshay dagaalkii sokeeya ee Dalka burburiyay, kolka aad aragto hab-dhaqankooda mooryaanimadda, dhaca iyo boobka ku salaysan oo ay Dadka kula kacayaan. Taa macnaheedu maaha in Ciidamadda dhammaan ay sidaa wada yihiin, Hasayeeshee waa dhaliil weyn oo aad u muuqata indhahana aan laga laaban Karin.
Dowladdu waxay maamushaa Xamartii hore ee Qaddiimka ahayd sida Degmooyinka: Xamarweyne,Shangaani,Xamar-jajab,Waabari,Boondheere iyoDegmadda Madiina. Sidaa soo kale waxaa jira Degmooyin ay isku horfadhiyaan kooxaha ka soo horjeedaÂ oo labada qola ba midna gacan buxda kuma hayo sida Degmooyinka C/Caziis,Shibis,Wardhiigley,Hodan iyo Howlwadaag.
Waxaan ku arkay Magaaladda Muqdisho Qad-cagaaran oo si iskiis ah u sameysmay kolka aad eegto sida ay Magaaladu u kala xidhan tahay oo ay ukala qeybsan tahay, Waxaa dhanka Dowladda looga tallaabaa labo wado middood oo kala ah :Ex koontarool Afgooye iyo wadda isgoyska Dabka ee Degmadda Waabari, inta kale waa goobo la isku horfadhiyo oo uusan qofna mari Karin.
Labada dhinac ee Siyaasadda Dalka maanta isku hayaÂ mid ba midka kale magac gaar ah ayuu ula baxay oo aan ahayn kan rasmiga ah ee ay isugu wan-qaleen. Dowladdu waxay u taqaanaa mucaaradka Nabad-diid, Ajaanib,Dhalinyaradda la qaldayÂ iyo kuwo kale, (waa sidey ugu yeedhaane). Mucaaradkuna sidaasoo kale waxay u yaqaanaan Dowladda Murtadiin iyo Gaalo diinta islaamka ka baxay (waa siday hadalka u dhigaanne) afkaartooda waa mid aad ukala fog dadka shacabka ah na lama dhacsana sida ay wax u socdaan.
Joqoraafi ahaan dhulka ay ka taliyaan Mucaaradka aan isku ujeedada ahayn, wuu ka baaxad weyn yahay dhinaca ay dowladdu joogto,
Waxaa si isku dhaf ah uga taliya Ururadda Alshabaab iyo Xisbul Islaam, oo midba amar soo saara, oo misana ka hirgaliya xoog iyo xeeladba.
Ururadan xiriir adag kama dhexeeyo, waxa kaliya oo ay isku waafaqsan yihiin na waa af-gambinta iyo rididda DKMG ah ee Muqdisho fariisinka u ah.
Mar kasta waxaa la filan karaa dagaal dhex mara labadan koox, kolka la eego hadaladda taagtaagan ee ay Warbaahinta isu marinayaan. Inta aan joogay Magaaladda waxaa xowli ku socday dilal qorsheysanÂ oo ay kooxuhu isku ugaadhsanayaan tiiyoo dagaal weyn uu isla kooxahan ku dhex maray Goboladda Jubbooyinka ilaa hadana weli halkaas ka socdo
Dhanka kale waxaa muhiim ah in kolba dhan la iska taago waxa markaa laga hadlayo. Hadaba waxaa la iska indha tiri Karin Amniga iyo Nabadgalyada ka jirta dhulka iyo deegaanadda ay kooxaha mucaaradku maamulaan.
Dhacdooyinka amni-darada ah ee ka dhaca Degmooyinka ay joogaan Muacaaradku waa kuwo fara kutiris ah ama waxaa la oran karaa waa waxaan jirin aniga aragtideyda, maxaayeelay waxaan arkay guryo muddo 2 sano ka hor laga qaxayÂ alaabtiina ay dhextaallo oo weli aan qaado laga qaadan cid waardiyeysana aysan jirin, sababtuna waxay tahay in ay gacan bir ah ku hayaan amniga oo hadii ay arkaan ruux ku kacaya waxyaabo amniga lid ku ah ama iyaga mashruucooda kasoo horjeeda waxaa la mariyaa ciqaab aad u adag, sidaa daraadeed dadku aad ayay uga baqayaan sax iyo qalad waxay sameyn lahaayeen ba.
In qof kastaa la marsiiyo abaalkiisa sifo uu amnigu usii jiro waa wax aad ammaan iyo bogaadin u leh, balse waxaa aad loogu dhaliilaa kooxahan dhulkan ka taliya in markasta ku amar ku taagleeyaan dadka oo misana ku kacaan arrimo aan waafaqsaneyn Shareecadda Islaamka sida: Dadka oo sida xoolaha loo bireeyo, cabsi galin joogto ah, handadaad iyo caga-jugleynÂ iyo ciqaab aad u adag oo ay fulinayaan dhalinyaro aad u daâ€™ yar tiiyoo aan loo aabbe yeelin nuuca ciqaabeed ee dambiilaha ku habboon, sidaa soo kale dhalinyaradda ciidanka u ah kooxahanÂ dadka ayay jir dilaan ama ugu yaraan garaacaan iyagoo aan marsiin habka caddaaladda iyo maxkamadaha.
Tusaale ahaan maalin baan isa soo dul taagay laba wiil oo dhalin yaro ah oo ahaa Kirishbooyo ama Nacamleeye .. sida ay dadka qaarÂ u yaqaaniin-Â waana wiilasha rara gawaaridda ukala gooshta inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye. Waaxaa ciqaabayay dhalin yaro kale oo ciidamada ka tirsan, dambiga kaliya eeÂ aadka loogu ciqaabayayna waa kaliya iyaga oo isku qabqabsaday dad rakaab ah.
Dadweynaha aad bey uga cawdaan kooxahan, waxaana ka mid ah in aad loo caburiyay dadka oo aysan dhaliili Karin ama wax ka sheegi Karin qaladaadka ay ku kacayaan dhalinta ciidanka u ah inay ammaanaan mooyee, taasoo si ugu eg habdhaqanka kali-talisnimadda. Nin baa maalin igu yidhi mar uu hadal iga soo baxsaday AFKAAGA GARIIR SAAR , kolkaan weydiiyay na wuxuu war iigu soo koobay sida mobile-ka ama telfoonadda gacanta gariirka (vibrating or silent) loo saaro afkaaga gariir u saar macnaha aamus oo afkaaga xidho haddaad rabto inaan magaaladan ku noolaato cidna afaarahooda ha galin. Intaan joogay Magaaladda gaar ahaan dhankan ay qolyahan mucaaradku ka taliyaan weli kuma arag laba qof ama koox dad ah oo intay meel isugu yimaadaan ka sheekeysta arrimo SiyaasaddaÂ iyo dagaaladda la xidhiidha ama ugu yaraan faaqidda wadciga uu Dalku marayo sababo cabsi iyo iyagoo ammaankooda u baqanaya xaaladduna waa â€œafkii baa juuq na gabayâ€.
Dhanka kale deegaanadan aan ka sheekeynayo waxaa aad ugu badan madaafiic tiro-beel ah oo ay soo hurgufayaan ciidamadda AMISOM, iyo ku DKMG ah, waana sababta kalliftay inay dadka aad uga barabaxaan oo ay geedaha hoostooda seexdaan ama ugu yaraan u cararaan dhanka dowlladda bacdamaa ay ka madfac yar tahay. Sida dad badan ay isla qireen madaafiicda waxay aalaaba kusoo hoobtaan dhankan ay mucaaradku joogaan kolka kooxaha dowladda ka soo horjeeda ay hoobiyeyaal ku tuuraan xarumaha ciidamadda AMISOM iyo kuwa dowladda. Waxaaba sheeko caan ah noqotay in marka madfac qolooyinkan mucaaradku ay tuuraan jawaab degdeg ah ay kasoo bixiyaan ciidamadda Afrikaanka ah, taasoo ay dadku magacyo dhowr ah u yaqaanaan sida (flash iyo soo wicitaan) oo ay ka mataleen telfoonka gacanta.. Madaafiicdu waa kuwo isdaba joog ah oo baas usoo dhaca sida qoryaha darandooriga u dhaca oo kale, malahaygu ruux Biniâ€™aadam ah ma ridee Barees Koronto ayaaÂ ku xidhan oo lagu ridaa oo shan shan iyo toban toban ayay halmar usoo dhacaan ilbiriqsiyo gudahood. Xasuuqa ugu badan baâ€™anna wuxuu ku dhacaa suuqa Bakaaraha.
Suuqa Bakaaraha inta taqaan way taqaan intaan aqoonse waa Suuq aad u weyn oo halbowle u ah guud ahaan ganacsiga Soomaaliya gaar ahaan Magaaladda Muqdisho.Muddo aan sidaa usii fogayn Suuqu wuxuu ka koobnaa Baqaarro iyo Sandaqado Jiingado ka sameysan, wixii ka dambeeyay duullaankii Ciidamadda Xabashiddu ku qabsadeen Magaaladda Muqdisho, waxaa aad usoo batay dhismayaasha shubka adag kasameysan ee dabaqyada ah, taasoo ay dadku ku micneeyeen in madaafiicda looga gabbado ama ugu yaraan looga gaashaanto dabka aalaaba ka kaca Suuqa oo ay hanti badan ku gubato. Suuqa Bakaaraha waa meesha kaliya ee ugu saxmadda badan illaa hadda Magaaladda Muqdisho, dadka ku ganacsada iyo kuwa usoo dukaameysi taga ba waxay isaga kala yimaadaan Magaaladda afarteeda gees. Suuqa maalmana howlihiisu si habsami leh ayay u socdaan halka maalmaha qaarna meydka iyo dhaawucu isdhex bilqan yahay madaafiicda culculus owgood oo dhagixii latuuraa qof ayuu ku dhacaa.
Suuqan waa xarunta ay ka biyo cabbaan Ururadda Dowladda kasoo horjeeda tiiyoo ay taal hanti badan oo ay soomali leedahay.
Dhan marka laga eego Suuqu waa meelaha ugu dhismaha badan misana ugu dhaqdhaqaaqa badan, waa Suuq soo dhaweeya Dadka dan-yarta ah, waa Suuq ay taal hantida ugu badan Dalka Soomaaliya.
Dhanka kale waa Suuq musuqmaasuq badan waxaana ku yaalÂ Xarumo waaweyn oo lagu sameeyo waxyaabaha la been abuuro waxaana loo yaqaan C/dalla Shiddeeye. Sidaasoo kale waxaa laga heli karaa oo lagu iibiyaa Hubka nuucyadiisa kala gaddisan. Suuqu wuxuu kaabigga ku hayaa aagga uu dagaalka ka holcayo sidaasoo ay tahay hadana Dadka ku ganacsada kuma ba jirto wax cabsi ah ama walwal ah oo howlahooda ayay iska wataan, qaarkoodna kamaba war hayaan waxa ka dhacaya dhanka kale ee Suuqa haddii Dad iyo Duunyo ku rogmadaan, marka uu madfac ku soo dhaco Dadka waxay ku dhuuntaan guryaha shubka ka sameysan oo wax xoogaa dhaama meelaha kale, kana qasaaro yar. XaafadahaÂ ay Dadka Shacabku daganaayeen iyo inta badan goobaha ganacsiga ee ku yaal dhankan ay joogaan Mucaaradku waa kuwo burbursan, Guri ma jiro illaa rasaas ayaa ku taal, maxaayeelay tan iyo waagii Xabashidu Dalka soo galeen madaafiicdii ku billaabatayÂ ayaa ilaa hadda ku socta.
Xaafadihii Dadku ku badnaan jiray manta waa cidlo, iska daa Dade Duunyo kuma dhaqna waa Howd waxaana aad ugu badan Geedka Cali-garoobka looyaqaan Dadka qaarna u yaqaanaan Geed-yuhuud iyo Boocbooc ayaa sidii keyn lama galaan ah uga baxay oo meelaha kan ayaa Dad ku noolaan jireen kugu soo dhici mayso
Warbaahinta qaybaheeda kala duwan sida Wargeysyadda, Idaacadaha, Televishinadda iyo qaybaha internetkaÂ dhammaan waa kuwo ka howl gala Magaaladda haba ukala dambeeyaane. Warbaahinta xorta ah gaar ahaan Idaacadaha gaarka looleeyahay ee Madaxa-bannaan ayaa sanadkii 1999 wixii ka dambeeyayÂ ahaa kuwo ka hanaqaaday DalkaÂ guud ahaantiisa siiba Magaaladda Muqdisho, Xilligaa wixii ka dambeeyay waxay ahaayeen kuwo xowli ku kobcayaÂ maalin ba maalinta ka dambeysa, misana uu tartan ka dhexeeyo. XilliganÂ Idaacadaha FM-ka ah ee ka howl-gala Magaaladda Muqdisho oo kaliya waxay tira ahaan sii cagacageynayaan 15 Idaacadood, dhamaan na waa kuwo gaar loo leeyahay marka laga reebo Radiyihii Qaranka oo ay Dowladdu maamusho hadda. Waxay ka soo wada galaan muujado is barbar yaal oo garbo siman ah, waxayna kala yihiin magacyadooda: Raadiyaha iyo Televishinka Hornafrik, Radio Banaadir, Raadiyaha iyo Televishinka Shabeelle, Idaacadda Quraanka Kariimka, Radio Soomaaliweyn, Radio Simbba, Radio Danan, Radio Xamar, Raadiyaha iyo Televishinka GBC,Â Radio Muqdisho, Radio Capital Voice,Â Radio Xurmo, Radio Alfurqaan Iyo Radio Bar-Kulan (waa radio uu UN-ku maalgaliyay).
Tira badnidaas tayo xumo ayaa u wehlisa. Barnaamijyadda ka baxa Idaacadahan waa kuwo aanÂ ku salaysneyn ujeedooyinkii kolkii hore laga rabay inay xaqiijiyaan oo ahayd inay dadka waxbaraan oo ay ku hanuuniyaan wanaagga, Nabadda iyo Horumarka ka shaqeeyaan , iyo inay xog iyo macluumaad xaqiiqda ku salaysan siiyaan dhageystayaashooda iyo inay Umadda ku Madadaaliso Barnaamijyo waxtar uleh shacabka caruur iyo ciroolabaÂ oo misana ku saleysan Qiyamka iyo Akhlaaqdda Umadda Soomaaliyeed iyoÂ ugu dambeyn inay ilaaliyaan Dhaqanka, Diinta iyo Qaranimadda Soomaaliyeed . Balse Idaacaduhu maaha kuwo utaagan waxyaabahaas aan kasoo sheekeynay, sababtuna waxay tahay Dadka ka shaqeeya oo aan aqoon fiican u lahayn Wariyanimada iyo Milkiilayaasha iska leh Idaacadaha oo mid kastaa dano gaar ah fulinaya bacdamaaÂ ay Idaacaduhu u badanyihiin Idaacado Ganacsi. Waxaa inataas u sii dheer maaha kuwo Umadax-banaan sameynta Barnaamijyadda iyo Wararka Xaqiiqda ku salaysan oo aysan sheegi Karin, taa cagsigeed waxaa loo yeedhiyaa Wararka ka turjumaya danaha Kooxaha Siyaasadda Dalka isku haya, Kooxdii iska weysana durbaba waxay ciqaab adag oo dil iyo handadaad bal eh isugu daraan Idaacaddii ka madax-adaygta awaamiirta Kooxda.
Guud ahaan Warbaahinta iyo Suxufiyiinta ka howl-gala Magaalada Muqdisho ma ahan kuwo xor u ah howlahooda iyo Mihnadahooda Warbaahineed. Runtii ciqaab aad uÂ kulul ayaa la marsiiyay illaa hadana lagama dayn cagajugleyntii iyo handadaaddii waana sababta keentay in inbadan oo Wariyayaal ah Dalka isaga barabaxaanÂ kuwa ku haray Dalka naÂ ay sandullo ku shaqeeyaan sifo ay u badbaadaan.
Markasta waxaa lagu qasbaa inay tabiyaan Warar aan Xaqiiq ahayn ooÂ Borobagaando u ah Shaqsiyaad ama Kooxo, haddaysan sidaa yeelinna waa Dil ama ugu yaraan waxaa lagala wareegayaa qalabka ay ku shaqeynayaan gabi ahaantiis.
Waxaa xusid mudan mar aan u kuur-galay sida ay Idaaacaduhu barnaamijyadda u tabiyaan in dhammaantoodÂ si isku mid ahÂ oo joogto ah u tabiyaan shiiqa Caanka ah ee Soomaaliyeed fadhigiisuna yahay Magaaladda Hargeysa waa Shiikh Mustafa X. Ismaaciil Haaruun. Baaritaan gaaban oo aan arintan ku sameeyay na waxaan ku ogaaday in arintan ah in Shiikha Idaacaduhu xushaan ka wadaad ahaan isla markaana uu noqdo Shiikha kaliya ee ay casharadiisu sida joogtada ah ugan baxaan Idaacadaha Muqdisho inay tahay Rabitaanka Shacabka.
Shiikhu waa Shiikh dadka wax ugu sheega si cilmi iyo caqli saliim ah ku qotoma oo inta badan dhiraandhirin iyo ka dhaadhicin ay xikmad ku jirto oo misana ay ka muuqato Miyir, Daganaan, Dulqaad iyo Dhimrin aan Caadifad lahayn Dadka u wacdiya una wacyi-galiya, mahadi haka gaadhee Shiikh Mustafe miisankiisana Alaha ugu daro.
Wadaadadii kale waxay noqdeen kuwo la kala safta kooxaha Siyaasadda Dalka isku haya: â€œMaxay ka nuugtaa muxuuse ka nuuggaaâ€ maxay Dad wacdiyaanÂ maxayse Dad wax u sheegaan iyagiibaaÂ manta faraqa isku dhaggan oo wax u sheeg u baahan maanta !!!……… Soomaalidaa waxay ku maahmaahdaa Haday qeylo yeedho masaajidkaa loo cararaa, Haday qeyladdii masaajidka ka yeedhanaÂ meel loo cararo ma lehâ€¦â€¦â€¦.
Ugu dambeyntii waxaa Warbaahinta Muqdisho lagu eedeeyaa inay iyagu masâ€™uul ka yihiin oo ay buunbuuniyeen Shaqsiyaad iyo Kooxo kolkii hore uusan Shacabku garanayn , isla markaana jecel inayÂ dagaaladda markasta ka sheekeeyaan halkii ay Dadka Nabadda u horseedi lahaayeen.
WAXBARASHADDA (Iskuuladda iyo Jaamacadaha)
Dabayaaqadii sagaashanaadkii ayaa Akhyaar badan oo GanacsatoÂ iyo Aqoon-yahan baÂ Leh isugu tageen, oo isku kaashteen sidii ay dib ugu soo noolayn lahaayeen burburkii weynaa ee si guudÂ ugu dhacay Waxbarashadii DalkaÂ oo leh Iskuul,Jjaamacad iyo dhammaan adeegyadii aasaasiga uhaa Tacliinta. Nasiib-wanaag raggan Aqoon-yahanka ah oo isxilqaamay ayaa wax badan qabtay oo runtii lataaban karo, rajadii ahayn in wax labarto ayay dib boodhka uga jafeen, Ubixii Dalka ayay Mustaqbal u ifiyeen, misana dhiiri galiyeen, waxay abuureen Goobo Waxbarasho oo Hor leh min D/hoose illaa heer Jamacadeed haba ukala gadisnaadeen Manaahijta iyo luqadaha wax lagu barto taasoo Jaha-wareer iyo dhibkeeda leh.
Runtii dagaaladan ugu dambeeyay ee Muqdisho ka holcaya ka hor Magaaladu waxay la ciirciiraysay saxmadda Ardaydda, waxayna aad ugu dhex dhalaalayay middabadda kala duwan ee dharka Ardaydu xidhaan. Nasiib xumo waxaas oo dhan oo wanaag ah lama xushmeyn, qiimihii iyo qaddarintii ay mudnaayeen na lama siin, waxaa ku dhacay hooggii ku dhacay Shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiis. Inta badan Iskuulladii iyo Goobihii Waxbarashada way burbureen , waa burburkoodii labaad tan iyo burburkii Dowladdii Soomaaliya. Ardayda iyo Macalimiinta ba saameyn weyn ayuu ku yeesheen Dagaaladan nasiib-darrada ah ee Dalka ka socda. Dilka, Dhaawaca, Barakaca, Qaraxyada, Burburka iyo Meehanowga ba intaba way isugu darmeen.
Bahda Waxbarashada bacdamaa ay ka mid yihiin bulshada inta soo hartay waa kuwo garab ku rarato ah oo hadba meeshii nabad ah kaddaga Magaaladda am ula qaxa Dadweynaha meeshay ubadkooda ula qaxaan.
CAAFIMAADKA IYO CUSBITAALADDA.
Sidaa soo kale Magaaladda malaha Cusbitaallo waa weyn oo ay u dhameystiran yihiin dhammaan agabkii iyo qalabkii caafimaad oo dabooli lahaa baahidda caafimaad haba ugu darnaadeen dhaawaca xad dhaafka ah iyo dhiig-baxa Shacabka Soomaaliyeed.
Cusbitaalladii laga dhaxlay Dowladdii Kacaanka waxaa weli ka nool oo ka dhaqdhaqaaqa labada Cusbitaal ee Madiina Iyo Keysaney, iyaguna waa kuwo aanÂ haqabtiri Karin dhaawaca isdulsaaran oo mar ba marka ka dambeysa iska soo daba dhacaya.
Waxaa intaas kasii daran oo aan la tacajibay dadka dhimirka beelay oo maskaxdu isku dhexyaacday, kuna wareeray dagaaladan aan kala joogsiga lahayn ee maalin ba maalinta ka dambeysa kasii daraya. Tiro aan yareyn asse aan anigu xisaabin ayaa ku waashay dagaaladda kuna miyir-gaddoomay aafadda socota. Inta badan dadku waxay ku hal-qabsadaan ama u sameysteen eray-bixin cusub sida: Hebel qadkaa ka maqan, Hebel waa Offline, Dibaddaa u furan iyo kalmado kale oo kuwaa la mid ah.
Mar aan booqday Cusbitaalka Madiina oo ah kan ugu dhaqdhaqaaqa roon Magaaladda ayaa waxaan kula kulmay diif iyo darxumo weyn oo haysatay Dad Shacab ah oo aan waxba galabsan oo si weyn loogu gumaaday Magaaladda Muqdisho.
Dhiigga iyo dheecaanka Cusbitaalka dhexyaal waa wax lagu yaqyaqsado, hadana waxaan kuu oggolaanayn damiirkaaga Soomaalinnimo,Islaanimo iyo mid kaaga Biniâ€™aadannima ba inaad ku labalabbooto darxumadda meesha taal. Dhanka kale Magaaladda waxaa si shul iyo shal ah uga dhex shaqeeya Gaadiidka Gurmadka Degdegga ah (Ambulance) oo ay ku tabaruceen hantiley Soomaaliyeed. Iyagoo aad u tira yar ayay u kala gooshaan dhaawaca iyo meydkana kasoo daadgureeyaan guud ahaan Magaaladda Muqdisho, Inkastoo aan la xushmeyn, shacabkuna dariiqyada ku cidhiidhiyaan dhinacyada hubeysanna ay rasaas la dhacaan in badan oo raggan ka mid ahna ay waxyeelo kasoo gaadhay amaba ku dhinteen.
Kadid duullaankii Xabashidu ku qabsadeen MagaaladdaÂ Caasimadda ah Ee Muqdisho waxaa barakacay sadex dalool laba dalool (2/3) Dadkii ku noolaa Magaaladda. Inta ku hartay Magaalada na waxay isugu jiraan kuwo dantu bidday inay dhex joogaan qaska iyo qalalaasaha islamarkaana aan haysan qarash ay ku qaxaan, iyo kuwo ka door biday dhilqaha, kutkudaha iyo kutaanta kabuuxda xerooyinka iyo deegaanada loo barabaxay inay ku nasiibsadaan madaafiicda la isku asqeynayo. Magaaladda Dadku way cidleeyeen, waxaad na mooddaa kolka aad dhex socoto howd lama galaan ah meelaha qaarkood, illeen Dadka ayaa cammira nolosha.
Dadku waxay daadsanyihiin inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye, waxaana abuurmay deeggaanno hor leh oo cusub isuguna tageen dadkii dan-yarta ahaa iyo kuwii wax haystay ba. Kuwo buushash cooshado ka sameysay iyo geedaha hoostoooda ayaa Hooy u ah halka dadka ladan ama uu jeebkoodu buudhan yahay ay dhisteen Guryo Villooyin ah. Waxaad na ka garan kartaa sida loo kala daggan yahay. Sidaa soo kale waxay abuurteen Suuqyo ganacsi oo runtii ay aad u cammirteen, gaar ahaan deegaanka Ceelasha Biyaha, oo aad mooddo kolka aad dhex lugaynayso inaad joogto Suuqa Bakaaraha.
Dhinaca kale Dadka dan-yarta ah waxay isdulsaaran yihiin buushash cooshado ah oo baakado iyo callalo la isku xidhxidhay ka sameysan, Inbadan oo kamid ah na waa bannaan-yaal aan xittaa haysan buush ay cadceedda, boodhka, iyo qabowga kaga gabbadaan. Dadku waxay ku firirsanyihiinÂ hareeraha Magaaladda Muqdisho sida: Garasbaaley,Siinka-dheer, Tareedishe (13km), Ceelasha Biyaha, Xaawo Cabdi, Calamadda, Lafoole illaa Degmadda Afgooye. Dhammaan deegaanadan waxay Muqdisho kaga beegan yihiin jihada Koonfureed. Sidaa soo kale waxaa jira Dad iyana daadsan Jihadda Waqooyi oo iyaguna CadceeddaÂ Marti u ahÂ ILAAHAY oo kaliya ayaa u maqan cid kale oo daryeesha ama ugu yaraan ka naxda waxa ay Dadkan ku suganyihiin ma jirto, iska badaa in wax la taree dagaalka ayaa looga daba geeyaa meelaha iyo xeryaha ay qoxootiga ku yihiin.
Silaca iyo saxariirta taal meesha wax laga sheekeyn karo maaha, waa wax aad u xanuun badan ruuxii damiir biniâ€™aadannimo uu ku dambeeyana waa wax uu aad ula murugoodo aadna uu uga qiiroodo diifta iyo dar-xumadda meesha taal.
Dadku waa Dad dan-yar u badan islamarkaana CaruurÂ ,Waayeel iyo Dumar ubadan, mana heli karaan waxay naftooda iyo Caruurtooda ku quudiyaan iskabadaa Huâ€™ iyo Hooy iyo meel ay kaga gabbadaan kuleylka qoraxdda. Qaarkood maalmo ayay qatanaadaan, Biyihii nolosha aasâ€™aasiga u haa na ma helaan hadday helaanna waa wax yar oo aan ku filnayn baahidooda maalmeed, maxaayeelay intii badnayd waa la joojiyay Hayâ€™adihii ku magacsheegan jiray ugu yaraan inay quudiyaan amaba haraad bixiyaan sababo ammaan. Sida intiina badan aad la socotaan waxaa la joojiyay Hayâ€™adihii Gargaarka oo ay ku jirto Hayâ€™adda WFP ee Qaramadda Midoobay u qaabilsan raashin qeybinta, Si kasta oo wax looga sheego ama dhaliil kasta oo ay leeyihiin Hayâ€™adaha Dad badan ayaa ku tiirsanaa oo ay wax un siin jireen.
Marka aad Kaamamka dhex marayso waxay indhahaagu qabanayaan Dad dhulka yaal oo aad moodo inay nolosha ka quusteen, qarkood Gaajo ayay sara-joogsigii la gabeen oo Macluun iyo Nafaqa-xumo ayaa ka muuqata, Halka qaarka kalana ay la daalaa dhacayaan Cudurro kala duwan haba ugu badnaadee Shuban Biyoodka ama DaacuunkaÂ bacdamaa xilligii kulaylaha lagu jiro, sidaa soo kale waxaa aad ugu badan Dadka Cudurrada Maqaarka ku dhaca waxaana sababta ugu weyn ay tahay dadkoo aad ugu badan Kaamamka iyo Nadaafaddoo aad ugu yar.
Qoysas badan ayaa dantu waxay bidday inay Caruurtooda u diraan Magaaladda si ay ugu soo qaraabaan Xalaal iyo Xaaraan waxay soo helaan maadaama ay Gaajo hayso, kolkaasaa dhalinyarro aad u Daâ€™ yar ku biiraan Kooxaha kala duwan ee Dalka ku dagaalamaya, Qaar way ku dhintaanÂ kuwana lixdooda lixaad ayay ku waayaan oo way ku naafoobaan dagaaladda halka qaarka kalana Raq Iyo Ruuxdooda ayaa la waayaa. Isku soo duuboo Dadka waxaa isugu darmayÂ Macluul,Gaajo, Oon iyo Harraad aan la qiyaasi Karin oo waxay arintu joogtaa halkii la odhan jiray â€œ Cidna Uma Maqna Ceelna Uma Qodnaâ€
Waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo qormadaydan dhowr arrimood oo isa sudhan : Waa midda koowaade in Dalkii iyo Dadkii ay ku halaagsameen Dagaaladan naxariisdarrada ah ee aan loogu aabba-yeelayn Shacabka marrasta iyoÂ maatidda u badan. Qodobka labaad na wuxuu yahay in guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan Reer Muqdisho marnaba aysan raali ka ahaynÂ rabinna Kooxahan kala jaadka ahÂ hadana kala ujeeddada ah ee ku hardamaya Xukunka Dalka, waxayna sheeko ka joogtaa â€œ Hashii Ninkii Gurranaa Uu Raacay Dhinacna Uma Fiyoobaâ€ iyo sheeko kale oo ahayd â€œ Hadda ka hor ayaa nin Geel fara badan lahaa, kolkaasaa maalinÂ Geelii intuu diday ayuu ninkii lahaa ku tuntay, intaa ka dib ayaa rag kale oo ay ninka Geela leh Qaraabo yihiin weydiiyeen Geelu wuuba kugu tuntaye Hashii kuugu darneyd, kolkaasuu ku jawaabay Miyayba ku jirtay hal aanan dhihin â€œMajabtey ahaydâ€ calashaan iima kala roonaynâ€ sidaa si la mid ah dhammaan kooxanan maanta Siyaasadda isku haysta ma jirto mid aan Shacabka dhibaateyn. Runtuna waxay tahay in kooxahan Magacyada kala duwan leh ay yihiin dhamaan anoon kala reebin Dowlad walaa Mucaarad â€œLahaystayaal is haysta oo hadana Dadka haystaâ€
WQ:Â Sayyidcali Xuseen Gaabane
Share this: La Qeybso AsxaabtaadaComments comments	Category : Maqaallo / Articles, Wararka Maanta.	« Previous Post